Images_2019-95 - Flash90
Israeli Police at a temporary checkpoint at the Jaffa Gate in Jerusalem on December 28, 2020, as Israel enters 3rd lockdown due to the COVID-19 coronavirus pandemic. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90
Jerusalemites wearing a face mask walk past closed shops at the Mamilla mall in Jerusalem on December 28, 2020, as Israel enters 3rd lockdown due to the COVID-19 coronavirus pandemic. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90
A woman wearing a face mask walks past closed shops at the Mahane Yehuda market in Jerusalem on December 28, 2020, as Israel enters 3rd lockdown due to the COVID-19 coronavirus pandemic. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90
Israel border police officers patroll outside the Mahane Yehuda market in Jerusalem on December 28, 2020, as Israel enters 3rd lockdown due to the COVID-19 coronavirus pandemic. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90
Jerusalemites wearing face masks walk in Jerusalem City Center on December 27, 2020, as Israel enters 3rd lockdown due to the COVID-19 coronavirus pandemic. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90